TSARA HO FANTATRA (25/08/11) - rov@higa
TSARA HO FANTATRA (25/08/11)
25 Août 2011, 23:15pm
Betsaka ireo vondron’olona misisika hanao fanelanelanana sy hampiverina ny rehetra hifampidinika amin’ny hivoahana amin’ny krizy, fa ireto ataon’ny “raiamandreny mijoro » no tena manalasala. Marina tokoa fa tsy misy mandaha ny hanaovana ireo fifidianana na iray aza, ary samy milaza fa ho amin’ny tombotsoam-pirenena no hitenenana. Fa ny fomba itondran’ny pasitera Ramino Paul kosa dia tena mahavariana. Lazainy mantsy fa noho ireo antony notanisaina ireo dia hiantso ny mpanao politika rehetra izy, ireo fikambanana sy ny sisa, ka ho hita eo izay tena mitady ny tombotsoam-pirenena. Resy lahatra mantsy Ramino Paul fa tsy hamaly ny antso ny “trois mouvances” ka ho mora indray ny hitoraham-bato an’izy ireo. Tsy vao voalohany hiantso fihaonana ny raiamandreny mijoro fa efa maro ireo nandroso hevitra talohany raha tsy ilaza hafa tsy i ingahy Fetison, ny CNOSC, ny “trois mouvances” raha teo, koa nahoana ny raiamandreny mijoro no tsy nanohana ireny ? Sa tsy maintsy ry zareo no miantso satria akaiky kokoa amin’ny fitondràna FAT ? Ingahy Ramaromaka indray dia manitrikitrika fa tsy azo antoka mihitsy ny CNOSC satria tena miandany amin’ny mpanohitra. Izany hoe izay miondana amin’ny … FAT ihany no ekena ? Andraso eo i … Ramino !
Magro Behoririka Hisy raha amin’ny sabotsy izao !
Tsy nisalasala ny mpitari-tolona etsy amin’ny Magro Behoririka toa an’Ignace nilaza teo an-kianja omaly fa : «tsy mahomby ny FAT, fa nitondra an’i Madagasikara anaty lavaka. Tombontsoa sisa no mbola ijanonan’ireo ao na dia efa mitsikera azy daholo ny rehetra. Manomboka mahatsapa daholo mantsy fa fahadisona no naterak’ilay fanovana». “Ny zava-marina tenenintsika miverimberina eto, herintaona aty aoriana vao misy mahatakatra”, hoy i Rostand mpanolontsaim-paritra avy any Horombe.
Tara herintaona foana ny FAT, hoy izy. Nohamafisin’i Sazalahy Tsianihy io. Mbola ity resaka ity ihany koa no nohamafisin’i Camille Mektoub tamin’ny hoe : tsy misy tsy miloa-bava amin’ny zavatra miseho eto amin’ny firenena. Tsy mahagaga raha miady an-trano sy mifanebaka anatiny ny FAT ankehitriny. Ny sasany efa manavotr’aina sao dobo ao ! Aza atao fanontaniana intsony ilay hoe hiverina ve i Dada, hoy izy, fa ny mpanapaka no hanatitra azy eto ary “raha mbola be fanahina ianao, dia tongava ao amin’ny Magro”. Sady nanamafy ireo i Zafilahy Stanislas no nanatsidika fa hisy zava-baovao hiseho ao amin’ny sabotsy ho avy izao.
Mila mailo ny mpandresy (+vidéos)
Efa mazava hatrin'ny ela fa tsy maintsy miverina amin'ny vahoaka ny fandresena rehefa nosandohin'ny mpanongam-panjakana izany tamin'ny 2009. Na ireo nanamafy sofina hatrizay aza "toa mba tonga saina". Manomboka eto zany dia efa azo tsapain-tanana ny fahafahan'ny Malagasy ary mivonona handray izany ny mpiray tanindrazana rehetra. Androany ohatra dia fantatra fa rehefa nanome "ultimatum" an'ny SADC i TGV sy ny governemantany dia toa tsy navelan'ny mpiambina ny lapa hiala tao Iavoloha ny mpitarika ny mpanongam-panjakana. Raha marina io vaovao io dia midika avy hatrany fa misy tokoa ireo "tandroka aron'ny vozona" no efa tonga saina ary mety efa tonga saina hatrin'ny ela fa tsy afa-manoatra.
Mahery tsy maody hono ...
Misesy tokoa ireo fanambarana isan-karazany toa manohana ny fitakiana ataon'ny mpandala ny ara-dalàna. Amin'ny dingana misy ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana dia ilana fahamailona izany sao endrika ivelany fotsiny hanaronana ny "kobay an-kelika" ka hiroboka ho azy anaty fandrika ny vahoaka Malagasy. Tsy tokony ho very an-javony mantsy ny aina nafoy sy rà latsaka hatrizay nitolomana ho an'ny fahafahana izay.
Raharaham-pirenena “Feno ny kapoaka !”, hoy ny filan-kevitry Ampanjaka sy Tangalamena
“Feno ny kapoaka ka tsy azo ekena intsony ny fitarazoan’ny famahana ny krizy. Heloka ny fahanginana ka manery an’Atoa Zafy Albert, Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina izahay hivory tsy misy hatak’andro hitady vahaolana eto an-tanindrazana: eto Antananarivo renivohitra”, hoy ny filan-kevitry ny Ampanjaka sy Tangalamena ao Mahanoro, Vatomandry, Tanambao Manampotsy, Marolambo, Nosy Varika, Mananjary, Ikongo ary Ifanadiana. Raha toa ka tena tia ny Malagasy sy Madagasikara marina izy ireo, hoy ireto raimandreny dia mila mitady hevitra hamahana ny krizy alohan’ny hivarinan’ity Nosy ity anaty hantsana mangitsokitsoka. Mandalo fotoan-tsarotra sy latsaka an-katerena ny firenena. Tsy afaka ny hijery fotsiny na hangina amin’izao izahay, hoy ihany ity filan-kevitry ny Ampanjaka sy Tangalamena ity satria mahatsapa izy ireo fa mampiteny ny moana ny fahasahiranana eto amin’ny firenena ankehitriny.
Niandrandra fiovana sy nanantena fiainana tsaratsara kokoa ny Malagasy kanefa hatramin’ny naha-Madagasikara an’i Madagasikara, hoy ihany ireto raimandreny ireto dia tsy mbola nisy toe-draharaha ratsy nampitondra faisana ny ankamaroan’ny Malagasy toy izao iainantsika izao. Very tanteraka ny maha-Malagasy, dia ny Malagasy tia fihavanana, hoy izy ireo, hany ka manjaka ny fitiava-tena, ny tsy fandriamapahalemana, ny kolikoly sy ny maro hafa tsy voatanisa. Ankoatra izay dia nosinganin’ireo Ampanjaka sy Tangalamena ny zara vilana amin’ny tombontsoa tampi-maso kely atao amin’ny vahoaka an-tanan-dehibe sy an-drenivohitra toy ny resaka Tsena Mora izay nomarihin’ireto raiamandreny ireto fa dia an-drenivohitra ihany no ahitana izany kanefa samy tra-pahasahiranana avokoa ny rehetra. Ho an’ny filan-kevitry ny Ampanjaka sy Tangalamena dia henatra sy fahafaham-baraka ho an’ny Malagasy ny fitadiavana vahaolana any ivelany.
Vondrona nanao sonia ny Dina Repoblikanina Mivaona ny FAT, aleo hody Ravalo !
Mitarazoka ny famahana ny krizy. Eo anatrehan’izany dia namoaka fanambarana ireo vondrona politika 6 nanangana sy nankatoa ny “Dina repoblikana” ary nanao rangopohy ny tondrozotra ahitana ny Les AS, HPM, Escopol, Arema, UAMAD ary ny MDM.
Voalaza ao anatin’ilay fanambarana fa “tsy manaiky ny hisian’ny fifidianana ary tsy handray anjara amin’izany mihitsy” izy ireo “raha tsy vita sonia ny tondrozotra nasiam-panovana”. “Vonona hanao sonia tsy misy fepetra izay tondrozotra asiam-panitsiana haroson’ny Mpanelanelana Iraisam-pirenena mba ho famaranana ny krizy sy ho an’ny tombotsoa ambonin’ny firenena izahay. Takianay ny hanaovana izany sonia izany amin’ny volana septambra 2011, mialoha ny fivoriamben’nv Firenena Mikambana any New York. Vonona lalandava nv vondrona pôlitika 6 hiatrika fifidianana rehefa feno ny fepetra takian’ny fenitra iraisam-pirenena mba tsy hisian’ny krizy miverimberina intsony eto Madagasikara”, hoy ny fanambarana.
Nilaza i Alain Andriamiseza avy ao amin’ny Escopol fa “handray andraikitra” ireto vondron-kery ireto raha tsy vita amin’io volana ambony io ny fanaov-tsonia ilay tondrozotra. Nitondra fanazavana momba io tondrozotra resahana io sy ny fanitsiana miaraka aminy kosa i Voninahitsy Jean Eugène. Nambaran’ny filohan’ny Les AS ary fa mankatoa ny tondrozotran’ny Sandton izy ireo ary tsy mampaninona raha miverina an-tanindrazana ny filoha teo aloha Ravalomanana hanasonia izany raha toa ka izay no hamaranana ny krizy. Tsiahivina fa nitsipaka marindrano ny fikasan-dRavalomanana hody eto Madagasikara hatrany i Voninahitsy hatrizay ary nanao rahom-bava mihitsy aza, fa hilevim-belona izy raha izany Marc Ravalomanana izany no migadona eto.
Politika ny resaka, saingy mihevitra ny maro fa zava-dehibe ny fahatsapan-tena asehon’i Voninahitsy toy izao, izay heverina fa harahin’ny hafa koa noho ny tombontsoa ambonin’ny firenena. Momba ny raharaham-pirenena kosa dia mahatsapa ireto vondrona ireto na dia ao anaty fitondrana aza fa tsy mifanaraka amin’ny fehin-kevitry ny Dina Repoblikana nosoniavin’izy ireo ny fomba fitantanan-draharaham-pirenena ka manampy trotraka ny olana ara-tsôsialy mianjady amin’ny vahoaka Malagasy ankehitriny. Nandefasan’izy ireo dika mitovy ny fanambarana ny filohan’ny FAT, ny Troika ao amin’ny SADC sy ireo mpanelanelana, ny Vondrona Afrikana. Miha-mitokamonina hatrany izany izao ny FAT satria efa misintaka aminy ny ankamaroan’ireo mpanao politika nanohana azy amin’ny alalan’ity fanehoan-kevitra farany ity. Ny UDR sy ny TGV sy ireo TIM nisintaka sisa no mpanao politika azon’i Andry Rajoelina ianteherana.
Tena mampalaza izao vanim-potoana tetezamita izao ny fandrenesana fa misy mikotrika fanonganam-panjakana hono any ambadimbadika any, ka mpanao politika, mpandraharaha ary manamboninahitra no voatonotonona ho ao ambadik’izany.
Dia eo ihany koa ny hoe fifofoana ny ain’ny filohan’ny FAT miampy fanipazana grenady amina tranon’olona ambony. Tsy mbola nisy tanteraka aloha hatramin’izao izany rehetra izany, fa nijanona ho siosion-dresaka ny fanonganam-panjakana ary nitsefotra fa tsy nipoaka ireo baomba na grenady. Maro koa no resy lahatra fa tsy vahaolana ny herisetra sy fampiasan-kery, porofo mivaingana amin’izany izao fahasahiranana izao noho ny fanonganam-panjakana narahina herisetra sy asa fampihorohoroana nitranga tamin’ny 2009 ireny. Maro be ny fampanantenana teny an-kianja saingy tsy nisy tanteraka izany, vao maika aza nihalafo ny vidim-piainana. Fa momba ilay hoe fikasana hanongam-panjakana dia maresaka tokoa izy io ary maro ny filazana fa misy ny fivoriana etsy sy eroa ary toa hoe tena misy mihitsy ny vondron’olona mikasa ny hanao izany. Fa hatramin’izao aloha dia tsy mbola namoaka anarana ny manampahefana manadihady ity raharaha tena saropady ity, hany ka samy manombatombana fotsiny ny tsirairay.
Fa na izany aza dia azo itarafana ny tsy filaminana sy tsy fisian’ny fitoniana ny zavatra tahaka izao ary manamafy hatrany fa mitombo isa ireo tsy mankasitraka sy leon’izao fitondrana tetezamita anjakan’ny gaboraraka izao. Be marenina ny FAT ka mety ho izay angamba ny antony mahatonga ny vondron’olona sasany mieritreritra fa mety ny fanonganam-panjakana satria raha marimaritra iraisana amin’ny resaka ambony latabatra no andrasana dia na haniry nify aza ny akoho tsy hiova amin’ny heviny izany ny FAT fa dia ny azy ihany no marina. Efa mahazatra aty Afrika rahateo ny fanonganam-panjakana amin’ny endriny maro samihafa ka tsy mahagaga raha tonga eto Madagasikara ihany koa. Raha ny tena marina anefa dia vahaolana mitondra olana vaovao izany fandrombahana fahefana izany ka tsy tokony hidirana intsony.
Mavesatra sy mankadiry arak’izany ny andraikitr’ireo mpitondra sy mpanao politika satria tena miankina tanteraka amin’izy ireo ny handamina na hampikorotana ny firenena. Efa tsy fotoan’ny fifanandrinana intsony izao fa fotoan’ny tena fifamelana sy fihavanana, fa raha tsy tafavoaka amin’izao i Gasikara dia mety ho izay no izy satria miha mafy ny krizy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ka ho arapaky ny ngeza fotsiny ireo firenena diso tratra aoriana loatra dia tsy hanan-tsafidy intsony fa ny hafa no hibaiko tanteraka azy. Tsy azo ialana ny fanatontoloana kanefa maro be ny fomba hahazoana tombotsoa aminy fa tsy hoe izay tenenin’ireo firenena matanjaka foana no tsy maintsy toavina sy arahana. Tsy maintsy misy ny vahaolana fa tsy voatery handalo amin’ny gidragidra kosa aloha e !